September 26, 2013 – democracy for burma
ပျက်စီးမှုများမည့် အင်အားပြင်းငလျင်ကြီးများ လှုပ်ခတ်နိုင်ခြေရှိဟု ပညာရှင်များသတိပေး
On September 26, 2013 September 26, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
thanlarwaddy times ပျက်စီးမှုများမည့် အင်အားပြင်းငလျင်ကြီးများ လှုပ်ခတ်နိုင်ခြေရှိဟု ပညာရှင်များသတိပေး
စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့တွင် ငလျင်လှုပ်နိုင်သည့်အပိုင်းများအနက် တောင်ဘက်ပဲခူးအပိုင်း၌ အင်အားကြီးငလျင်များ လှုပ်နိုင်ခြေရှိပြီး အကယ်၍ လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါက ၁၉၃၀ခုနှစ်ကလှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ပဲခူးငလျင်ထက်အပျက်အစီး ပိုမိုများပြာနိုင်သည် ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ငလျင်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးသူရထွန်းက သတိပေးပြောကြားလိုက်သည်။
“တစ်ပိုင်းချင်းဆီက ပမာဏ ၇အဆင့် လောက်ရှိတဲ့ ငလျင်တွေ လှုပ်လေ့ရှိတယ်။ တစ်ခါလှုပ်ပြီးသွားရင် နှစ်(၁၀၀) ၀န်း ကျင် လောက်ဆိုရင် တစ်ကျော့ပြန်လှုပ်တတ်တယ်။ ပဲခူးအပိုင်းက၁၉၃၀တုန်းက လှုပ်ခဲ့တယ်။ သူ့မြောက်ဘက် ဖြူး အပိုင်းကလည်း ၁၉၃၀ကပဲ လှုပ်ခဲ့တယ်။ ပြတ်ရွေ့တစ်ခုလုံးလှုပ်ခဲ့တဲ့ ငလျင်တွေက နှစ်ပေါင်း(၈၀)ကျော်နေပြီ။ အခု နေ လှုပ်ရင် အင်အားပြင်း ငလျင်တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်”ဟုဦးစိုးသူရထွန်းကပြောသည်။
ငလျင်ကြီးများနှင့်အင်အားပြင်းငလျင်များလှုပ်နိုင်ခြေ အများဆုံးမှာ မန္တလေးမှရန်ကုန်အထိ ဖြစ်နိုင်ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင် လှုပ်ခတ်မည်ကိုမူ ခန့်မှန်းရခက်ကြောင်း ဦးစိုးသူရထွန်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ထို့အပြင်သပိတ်ကျင်းမြို့၌ လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် ငလျင်ကြီး၏ နောက်ဆက်တွဲ လှုပ်ခတ်မှုဖြစ်လျှင် စိုးရိမ်စရာမရှိသော် လည်း မြောက်ဘက်ပိုင်းတကောင်းဘက်ခြမ်းရှိသည့် စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ပိုင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဆိုပါက စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေ ဖြစ်သည်ဟု ငလျင်ကော်မတီမှ သိရသလို မြန်မာနိုင်ငံဘူမိသိပ္ပံအသင်းအနေဖြင့်လည်း လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်နေ သည်ဟု သိရှိရသည်။
“ဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်။ ဘယ်တော့လည်းဆိုတာအတိအကျ မပြောနိုင်ဘူး။ စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ မှာ ငလျင်ကြီးတွေ လှုပ်ခဲ့တာကြာပြီလေ။ တော်တော်လေးစိုးရိမ်ရလို့ လေ့လာမှုတွေ တောက်လျောက် လုပ်နေပါ တယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံဘူမိသိပ္ပံအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြိုင်စိန်က ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေများကိုသိရှိနိုင်ရန် ပဲခူး၊ တောင်ငူနှင့်စစ်ကိုင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများ၌ ဘူမိပညာရှင်များအနေဖြင့် ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများ ဆောင်ရွက် နေကြောင်း၊ အဆောက်အအုံအခြေအနေနှင့် လူဦးရေအနေအထားများကိုလည်း သုံးသပ်လေ့လာလျက်ရှိသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဘူမိသိပ္ပံအသင်းမှ သိရှိရသည်။
ထိုသို့လေ့လာဆောင်ရွက်ရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံဘူမိဗေဒပညာရှင်များနှင့် ယူအင်န်အဖွဲ့များ၊ စင်္ကာပူပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့တောင်ပိုင်းတွင်မူ ၁၉၃၀ခုနှစ်က အင်အားရစ်ခ်ျစတာစကေး ၇ဒသမ၃အဆင့်ရှိ ပဲခူးငလျင်ကြီး လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် အတွက် ပဲခူးမြို့တွင် လူပေါင်းရာနှင့်ချီသေဆုံးခဲ့သည့်အပြင် စေတီပုထိုးသာသနိက အဆောက်အအုံများ များစွာပျက်စီးခဲ့ရပြီး ပဲခူးရွှေမော်ဓောစေတီ၏ ထီးတော်မြေခခဲ့ရသည်။
စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့၏ မြောက်ဘက်ပိုင်း၌လည်း ၁၉၅၆ ခုနှစ်က လှုပ်ခတ်ခဲ့သော စစ်ကိုင်းငလျင်ကြီးကြောင့် လူအသေ အပျောက် များခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်က စစ်ကိုင်းခရိုင်နှင့် ရွှေဘိုခရိုင်ကို ဗဟိုပြုပြီး အင်အား ရစ်ခ်ျတာ စကေး ၆ ဒသမ ၈ အဆင့်ရှိ ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး လူအသေ အပျောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ တောင်ပိုင်းတွင်မူ ၁၉၃၀ ခုနှစ်က အင်အား ၇ ဒသမ ၃ အဆင့်ရှိ ပဲခူးငလျင်ကြီး လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် ငလျင်များ ထပ်မံ မလှုပ်ခတ်တော့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ဘက်မှ ရန်ကုန်မြို့ သုံးခွမြို့နယ်အထိ အင်အား ၇ အဆင့်ရှိ ငလျင်များ လှုပ်ခတ်နိုင်ခြေ မြင့်မားနေကြောင်း သိရသည်။
“အပျက်အစီးကတော့ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိဖြစ်မယ်လို့ မပြောနိုင်သေးဘူး။ အသေးစိတ် သိနိုင်ဖို့ ကွင်းဆင်း လေ့လာမှု တွေလုပ်နေတယ်။ သေချာတာကတော့ ၁၉၃၀ ငလျင်ထက် အပျက်အစီးပိုများနိုင်ပါတယ်” ဟု ဦးစိုးသူရ ထွန်းက ဆိုသည်။
ထိုသို့ခန့်မှန်းရခြင်းမှာ ၁၉၃၀ခုနှစ်တွင်လူဦးရေသည် ယခုလောက်ထူထပ်များပြားခြင်းမရှိသေးဘဲယခုအချိန်တွင် လူဦး ရေထူ ထပ်များပြားလာသည့်အပြင် တိုက်တာအဆောက်အအုံများလည်း ယခင်ထက် ပိုမိုများပြားလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရ သည်။
“ ငလျင်လုပ်နိုင်ခြေများတယ်လို့ ခန်းမှန်းထားတော့ အားလုံးသတိထားနေကြတယ်။ ရှေ့မှာလည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတာရှိခဲ့တော့ စိုးရိမ်မှု တွေတော့ ရှိကြတာပေါ့”ဟု ပဲခူးမြို့  ဥဿာရပ်ကွက်နေထိုင်သူ ဦးဗိုလ်မြင့်က ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၀ရက် ၊ ညနေ ၅ နာရီ ၅၈ မိနစ်အချိန်တွင် သပိတ်ကျင်းမြို့အနီးကို ဗဟိုပြု၍ အင်အား ရစ်ခ်ျတာ စကေး ၄ အဆင့်ရှိသည့် မြေငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပြီး ညနေ ၆ နာရီ ၂၃ မိနစ်တွင် သပိတ်ကျင်းမြို့၏ တောင် ဘက် ၅မိုင်ခန့် အကွာ ကို ဗဟိုပြု၍ အင်အားရစ်ခ်ျတာစကေး ၅ အဆင့်ရှိ မြေငလျင်ထပ်မံ လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း၊ယင်းနောက် ညနေ ၆ နာရီ ၅၅ မိနစ်တွင် သပိတ်ကျင်းမြို့၏ အနောက်မြောက်ဘက် ၄ မိုင်ခန့်အကွာကို ဗဟိုပြု၍ အင်အား ရစ်ခ်ျတာစကေး ၅ ဒသမ ၄ အဆင့်ရှိ ငလျင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
source by-Myanmar Earth Quake & Tsunami News မြေငလျင် ဆူနာမီ သတင်း
MYANMAR Government military raided on the natives’ properties across Shan State
On 16.09.2013 morning, Burmese soldiers from Meung Gyi township encountered (6) young guys on the way or marching to Wan Zun Men village and arrested them to guide the ways then released back.Before released these guys, Burmese soldiers threateningly ordered them not to tell anyone that they had beenarrested for awhile and what if these guys don’t exactly what they said: they could follow and killed them right there.On 17.9.2013 morning at 11 am,these Burmese soliders which from Meung Kyi and KIA Armed Force were fighting
at the exist of Wan Zun Men village, Meung Gyi township. The fighting was last for an hour. But still don’t how
many loss of two sides.
photo credit jade
BURMA ARMY FORCE VILLAGERS TO CARRY
Tuesday, 24 September 2013 13:56
On 28.08.2013 Loi Lam Brigade led by Captain Win Htun forcibly demanded bamboo and woods from villagers at Wan Ho Tien, Taung Nao area, Loi Lam township. In the beginning , they just demanded three bamboo, but when it came in actuality they took ten bamboo in amount and more woods. They came to demand the villagers again on 09.09.2013.On 01.09.2013, Brigade 249 led by Saw Latt Naung and 24 of his fellows forcefully abducted two villagers to guide them to the forest – Sai Ban Tha Wa and Sai Zarm Hla who are the sons of Loon Gaw (Father), Pa Shwe (Mother) and Loon Saw (Father), Pa Naung Yuang (Mother) from Wan Pang Wa village, Park Sang area, Mueng Geung township. Trucks and cars were asked by Burmese that had takenabase at Don Lao area, whethere they saw Shan soldiers or not on they way they were driving .Dong Lao natives were forced to wear Burmeses’ military uniform to take the pictures of the temple of Wan Harm Ngai’s village, Wang Mueng village and Ban New village on 07.09.2013.Burmese Brigade 292 led by Kyaw Kyaw Lwin and 15 soldiers demanded horses and men for labours who were:
(1) Loon Maung Htun 45 years old and together with his horse from Wan Pung Zouk village,
(2) Loon Wa 35 years old and his horse from Wan Mai Sak , had guided Burmese to Wan Nar Hee without getting paid for horses and wages .
And Brigade 296 led by Major Ye Htut with 70 soldiers demanded Wan Naung Sen villagers’ money which are 100,000 in amount,2buckets of rice which cost 10,000 kyats. And also demanded at Wan Kyauk Teng, Nee Lart area with the same previous cost and amount .
On 10.9.2013, Brigade 325 led by Aung Khin Oo and 30 soldiers asked for beans in the farm of Sai Htun Lee at Wan Lock Zouk.
On 12.09.2013, Brigade508 which is active in Meung Paing with 15 soldiers in numbers forciably asked for money from Mai Dee village, Wan Hai Kai, Par Kee area, Ho Pong township.
(1) Loon Khin age (45) from Wan Nar Lung, Meung Paing township lost his sawmill which cost 200,000 kyats,
(2) Loon Saw age (46) from Wein Mai village,Meung Paing township have lost his sawmill which cost 200,000 kyats,
(3) Loon Hla Phae age (46) live in Wein Mai, Taunggyi have lost his sawmill and also Loon Saw age(42) from Wan Narr Lung , Meung Paing township; Ko Kyaw age (48) from Taunggyi : they all have lost their sawmill which cost in the same amount like the previous villagers .
1. A9-man delegation led by president of the Karen National Union (KNU), Gen. SawMutu Say Poe, will leave from the KNU Supreme Headquarters, on September 26,2013, for meeting with Myanmar government leaders as well as Tatmadaw leaders.
2. Thedelegation will discuss mainly about the future political dialogue in store.
3. TheKNU would like to inform that it will endeavor for the establishment ofagenuinepeace through dialogue.
Contact Point: (1)Padoh Gwe Htoo Win – 081 807 6279
(2)Padoh Mahn Mahn – 0879438750
GOOD NEWS : Quintana is not extended as special rapporter for Burma Myanmar !!!
Quintana is not extended as special adviser for Burma, someone will replace his place.NO MORE!!
WE REACHED THE GOAL, THANK YOU
မ နေ့ က ကျင်းပ ပြုလုပ်တဲ့ ကုလသမ္မဂ လူ့ အခွင့်အ ရေးဆိုင် ရာ အစည်းအ ဝေး တစ်ခုမှာ ကန်တားနားကို တာဝန်မှ ရပ်စဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်..
အမှန်တကယ်တော့ သူ့တာဝန် သက်တမ်း ခြောက်နှစ်ဟာ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ
မြန်မာပြည် နောက်ဆုံး ခရီးစဉ် အပြီးမှာ အဆုံးသတ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ သ ဘောထား
အမြင် သုံးသပ်ချက်တွေဟာ တဖက်သတ် ဆန်လွန်းတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ.. ကန့် ကွက်မှု့ တွေ.. မြန်မာပြည်သူတွေ ကမ္ဘာသိအောင် ပြသနိုင် ခဲ့တဲ့နောက်မှာ အ ခြေအ နေ တွေက ပြောင်းခဲ့ရတာပါ။
ဒီဖြစ် ရပ်.. သ ဘောထား.. တွေဟာ အမှန်ပဲလား ဆိုတာ မြန်မာနိုင် ငံဆိုင် ရာ
လူ့အခွင့်အ ရေး အထူးအကြံပေး ကိုယ်စားလှယ် ဗီဂျေ နမ်ဗီးယား ကိုယ်တိုင် ကန်တားနားရဲ့မ အောင်မြင် တဲ့ ခရီးစဉ် အပြီးမှာပဲ ချက်ချင်း ရောက်လာပြီး စုံစမ်း အတည်ပြု ချက် ယူခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ထူးခြားတာ တစ်ခုက မိတ္ထီလာ ဖြစ်စဉ် အပြီး (24.3.2013) နေ့ တွေမှာ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် လေ့လာခဲ့သူ မစ္စတာ နမ်ဘီးယား ဟာ 969 စနက် မကင်းဘူးလို့အစောပိုင်းမှာ သံယောင် လိုက် ပြောခဲ့ပါသေးတယ်.. ဒါပေမဲ့
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကန့် ကွက်မှု့ ကို သေချာသိပြီး နောက်ပိုင်း ယခုခရီးစဉ် အပြီးမှာ လုံးဝ လေသံပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာပြည်တွင်းရေး ဖြစ်ပါတယ်
ပြည်တွင်းရေးကို ဘယ်သူမှ ၀င် စွက်လို့မရသလို ၀င် စွက်ဖက် ရင် လဲ ဘယ်နိုင် ငံကမှ လက်သင့် ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့တရားဝင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သတင်းကောင်းပါ ကျွန်တော်တို့နိုင် ငံသားတွေ အ နေနဲ့ အရာရာကို
ေ ခါင်းငုံ့မခံပဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ကမ္ဘာသိအောင် ပြောကြဖို့လိုပါတယ်။
ဒါဟာ စည်းလုံးမှု့ ရဲ့ အောင် ပွဲပါ….။
ဒီနေရာမှာ ဆရာတော် ဦးနာယက (U.S.A) နဲ့ 
ကိုလင်းထိန် (U.K) တို့ ကိုလဲ ကျေးဇူး တင်ကြောင်း မှတ်တမ်း တင် လိုပါတယ်…..
U WIRA THU: “သိန်းတစ်ရာမမက်သော တောသူမ” – ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ ဇဇရပ်ကွက်မှာ ဒေါ်တင်တင်အေးအမည်ရ ကန်စွန်းရွက်သည်ကြီး
On September 26, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
သမီးအကြီးမ မဖြိုးဖြိုး (၁၆) နှစ်အရွယ်မှာ မူဆလင်ကုလား ပိုးပိုး(ခ) ဇော်ကြီး (…..) နှစ်ရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒေါ်တင်တင်အေးက ရဲတိုင်ပါတယ်။ ကုလားကို 17.5.2013 မှာ ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ ကြံရာပါ ဒေါ်နွဲ့ကိုဖမ်းထားပြီးမှ အာမခံပေးထားပါတယ်။ ဇွန်လမှာ ဒေါ်နွဲ့သမီးနှင့် ကုလားတစ်ယောက်က ဒေါ်တင်တင်အေးကို သိန်း(၅၀) ပေးပါတယ်။ ကြေအေးဖို့ပါ။ ဒေါ်တင်တင်အေးက “လူတွေကို ဟင်းရွက် ကန်စွန်းလို သဘောထားပြီး ရောင်းဝယ်လို့မရဘူး” လို့ ဆိုကာ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။
“မင်း…..သိန်းခြောက်ဆယ် နည်းလို့လား၊ သိန်း တစ်ရာပေးမယ်”
“သိန်းတစ်ရာယူပြီး ကိုယ့်သားသမီးအမည်းစက် အစွန်းခံရတာမျိုး လုံးဝမလိုလားဘူး၊ လက်ခံလိုက်ရင် သွေး သားရောင်းစားလိုက်သလို ဖြစ်သွားမှာ။ ဥပဒေရှိနေလို့ ဥပဒေအရ အရေးယူတာ ဥပဒေသာမရှိရင် ကျွန်မကိုယ် တိုင် ကုလားကိုသတ်မှာ”
တရားခံ ပိုးပိုး(ခ) ဇော်ကြီးဟာ ရေတံခွန်တောင်ခြေမှာနေပြီး ရေတံခွန်တောင် ဂေါက်ကွင်းမှာ သစ်ပင်ရေး လောင်းတဲ့ အလုပ်သမားပါ။ ငွေသိန်းတစ်ရာကို ဘယ်သူတွေက ထောက်ပံ့တယ်၊ ဘာကြောင့် ထောက်ပံ့တယ် ဆိုတာကတော့ ပဟေဠိမို့ အဖြေညှိကြစို့နော်….။
အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်မရှိ၊ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှာနေရတဲ့ ဟင်းရွက်ခူးရောင်းရတဲ့ ကန်စွန်းရွက်သည် ကရင်/ခရစ်ယာန် မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရားနှင့် ဇာတိသွေး ဇာတိမာန်ကို ရွှေမြန်မာတွေ မီအောင်တောင် လိုက်နိုင်ပါ့ မလား….?ဗျာ။ တကယ်ဆိုရင် လက်လှုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်ရတဲ့ ဆင်းရဲသူ၊ ဆင်းရဲသားအတွက် ငွေသိန်းတစ်ရာဟာ သွားရည်ကျစရာကြီးမဟုတ်လား….?။